PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-10-28 - Bakhishwe ezikhundleni abacele ucansi
Bakhishwe ezikhundleni abacele ucansi
esingeke simdalule, uthi omunye wabaholi wamtshela emehlweni ukuthi umfisa ocansini uma engavuma uyophathiswa okweqanda emsebenzini.
“Wathi uma ngingase ngimqome nje uyongenzela konke ngnyuselwe esikhundleni nemali ithi xaxa. Ngithe uma ngilubika lolu daba kwaphuma nomunye wathi naye ukhona ubengamnike thuba emfuna embhedeni,’’ kuchaza lo wesifazane.
Uthe babhalele iSamwu esifundazweni babika lo mhlolo bacela nomhlangano ophuthumayo. UNobhala wale nyunyana KwaZulu-Natal uMnuz Jaycee Ncayiyana ukuqinisekisile ukuhoxiswa ezikhundleni kwabaholi emuva kokuthi kukhononde abasebenzi bethi abasabethembi.
“Bathathu abahoxisiwe kodwa lokhu akusho ukuthi izinsolo ziyiqiniso ngoba akukho okubambekayo. Abasebenzi baphakamise ivoti lokungabethembi ubuholi babo sase sibehlisa-ke ngokulandela umthethosisekelo,’’ kuchaza uNcayiyana.
Uthe kodwa labo abafake izikhalazo zocansi bangaqhubeka nazo ukuze kuphenywe kabanzi ngalokhu.
Kuthiwa laba baholi bangobhululu bezikhulu ezithile okwenza kube lula ukuthi babe nomthelela ekwenyusweni kwezimali nezikhundla. IMeya kaMasipala uMshwathi uNkk Sphindile Mbhele, uthe belukhona ukhetho lwenyunyana kodwa akazi ngezinsolo zokucela isinene.